mr TM November 18, 2012 - 7:54 pm ရခိုင်အရေးကြောင့်ကမ္ဘာမှာမြန်မာမျက်နှာပျက်ရတယ်လို့သမတကြီးရဲ့စကားကိုဖတ်ရတော့ရယ် ချင်မိပါတယ်၊ကျွန်တော့်အထင်တော့သမတကြီးကြောင့်မြန်မာပြည်မျက်နှာပျက်ရတာပါအချိန် မှီထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့အမှုတခုကို ၆လကြာတဲ့အထိမဖြေရှင်းနိုင်တာကိုကစဉ်းစားစရာပါ၊ရွှေဝါရောင်အရေးခင်းမှာဘုန်းဘုန်းတွေ ကိုသေနတ်နဲ့ပြစ်သတ်ခဲ့ပြီး ၃ရက်နဲ့အပြတ်ရှင်းနိုင်ရင်ရခိုင်အရေးအခင်းကိုဘာကြောင့်မဖြေရှင်း နိုင်ပါသလဲ?အခုကြမှရိုဟင်ဂျာတွေကိုနိုင်ငံသားအဖြစ်ပေးဘို့နဲ့ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေနဲ့အတူနေ ထိုင်နိုင်ဘို့ကိုစဉ်းစားပြောဆိုလာတာကအိုဘာမားလာမှာမို့လို့လား?Multilateral Affairs ဆိုင်ရာအကြီးတန်းဒါရိုက်တာစမန်ပါဝါကသတင်းထောက်တွေကိုမြန်မာအစိုးရရဲ့ပွဲစားအဖြစ်နဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေထိန်းသိမ်းနိုင်ဘို့အတွက်မြန်မာအစိုးရကတာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ဆောင်ရွက်ချက် တွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်၊တကယ်တော့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသယ်တွေဟာအခုထိ ဘာမှမယ်မယ်ရရကူညီမှုမရသေးပါဘူး။သမတကြီးတဦးအနေနဲ့ကိုယ့်ပြည်နယ်ကိုယ့်လူမျိုးစု ဆိုတဲ့စကားထက်ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်နိုင်ငံသားဆိုရင်ပိုမှန်ကန်ပါလိမ့်မယ်။
Reply ထန်ကျင့်ပေါင် November 18, 2012 - 9:18 pm မြန်မာပြည်မှာ ရခိုင်ပြသနာဖြစ်လာရတာဟာ… ဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် အဆိုးဆုံးကတော့ အစိုးရအကြီးအကဲတွေကိုယ်တိုင် ဘာသာရေးအစွန်းရောက်ပြနေခဲ့ကြတာပါပဲ … ပြည်သူတွေရှဲုအမြင်မှာ သူတို့ကိုသူတော်ကောင်းတွေလို့ အမြင်ရှိလာပြီး အမှတ်ကောင်းကောင်းရမယ် ထင်မှတ်ခဲ့ကြဟန်တူပါတယ် … စစ်ယူနီဖောင်းတွေ ၀တ်ဆင်လျှက်နဲ့ လူမြင်အောင်ဘာသာရေးလုပ်ပြနေကြတာကို စစ်အစိုးရ၏သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် မမြင်ချင်အဆုံးပါပဲ နေ့စဉ်ထုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာ နေ့စဉ်မပြတ်ဖော်ပြနေခဲ့ကြတာပါ… နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေး ရောထွေးဆောင်ရွက်ပြီး …. အစွန်းရောက်အမျိုးသားရေးကို ရှေ့တန်းတင်လာကြရင်တော့ ဒီလိုပြသနာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာ ဗိုလ်ချုပ်တို့ခေတ်ကတည်းက အမြော်အမြင်ကြီးမားတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေက ပြောကြားထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် … နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးဆိုတာ သီးခြားစီသာဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းကို … အကြိတ်အနယ်ဆွေးနွေးအကြံပြုခဲ့ကြပါတယ် …ဆင်ခြင်ကြဖို့သင့်ပါတယ်ဗျာ …. မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဘာသာစုံနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အရှိအတိုင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အသိအမှတ်ပြုလက်ခံကြရပါမယ် .. တိုင်းရင်းသားအတော်များများဟာ … ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာကိုလည်း သတိပြုကြရပါမယ် … တစ်ဘာသာတည်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာဖို့တွေးခေါ်ကြံစည် လုပ်ဆောင်နေကြမယ်ဆိုရင် … အတွင်းပိုင်းမှာ အချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းတွေကွဲလာပြီး … နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်လောက် နောက်ကျကျန်ရစ်နေခဲ့တဲ့ ဒီနိုင်ငံအနေနဲ့ ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့ဆိုတာဝေးစွ …တစ်စစီ ပြိုကွဲသွားနိုင်တဲ့အထိ အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်ပါတယ်… ကချင်ပြသနာ ယနေ့အထိ မပြေလည်နိုင်သေးတာဟာလည်း ဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှုနဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရမှုတွေ ပါဝင်နေနိုင်ပါတယ် … အချိန်မီ ဆင်ခြင် ပြင်ဆင်ကြဖို့သင့်ပါတယ်ဗျာ ….
Reply Myant Linn November 18, 2012 - 10:21 pm မျက်နှာပျက်စရာ ဖြစ်အောင် ဘယ်သူက စပြီးဖန်တီးတာလဲ။ ကိုယ် ကတဲ့ ဇာတ်ကို ကိုယ်မနိုင်တဲ့အခါ သူများကို အပြစ်ဖို့ရန် ကြိုးပမ်းကြတာ ကတော့ လူကြီးကျင့်ဝတ်နဲ့ မညီဘူးထင်တယ်။ ရခိုင်ပြည်ထဲ၌ အခြေချနေထိုင်လာတဲ့ အဲဒီလူတွေကို နိုင်ငံသားပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်း သူတို့ ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်ပိုင်ခွင့်၊ လုပ်ကိုင်စားသောက်ပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်။ ဒါကြောင့် ရိုးလမ်း၊ အမ်းတောင်ကြားလမ်း၊ ဂွ ငသိုင်းချောင်းလမ်းတွေကို လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး သွားလာခွင့်ပြုဖို့ ဖွင့်ပေးပါ။ တကယ့် စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီး တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အတွက် တကွက်ချန်တဲ့ လူလည်အလုပ်တော့ မလုပ်ကြပါနဲ့။
Reply တာတေ November 18, 2012 - 10:59 pm ဘယ်နေရာမှာတွေလုပ်လုပ်လူတွေကတော့သံသယတွေနဲ့ 
Reply pps12345 November 18, 2012 - 11:30 pm ကိုသိန်းစိန် ပြောတာကောင်းပါတယ်။ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသူ အများစု ဟာ တပ်မတော် အစိုးရ လက်ထက်မှာ ဝင်ရောက်လာခဲ့သူတွေပါ။ ရခိုင်တွေကလည်း မကျေနပ်ရင် တပ်မတော်ကို ပဲ ပြောသင့်ပါတယ်။ အခုတော့ တိုင်းပြည်မျက်နှာပျက် ရပြီပေါ့။ အစွန်းရောက် ဆိုရင်ဘယ်ဟာမှ မကောင်းဘူးလို့ ဘုရားဟော ထားတာရှိပါတယ်။ အဓိက ပြဿနာရဲ့ အရင်းအမြစ်က တပ်မတော် အစိုးရ လက်ထက် အဆက်ဆက်မှာ အာဏာ အလွဲသုံးစား လုပ်မှု တွေ များလို့ တိုင်းပြည်မှာ တိုင်းပြည်မှာ တိုင်းတပါးသားတွေ များခဲ့ တယ် ဆိုတာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ သိထားသင့်ပါတယ်။ လူအချင်းချင်း အမုန်းပွားခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ။
Reply soe lin November 18, 2012 - 11:42 pm you shouldn’t call ရိုဟင်ဂျာ they are really come from Bangladeshi so should call ဘင်္ဂါလီ
Reply မင်းကြီးညို November 18, 2012 - 11:50 pm အင်း၊ အုတ်ရောရော ကျောက်ရောရော နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်ရင်တော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ
Reply ရာဇာ November 19, 2012 - 1:07 pm အသေခံ ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်တတ်သူတွေ ရဲ့ အကြောင်း နားလည် သဘောပေါက် ထားတယ် ဆိုရင် ဂတိတွေကို အလွယ်တကူ မပေးပါနဲ့….မြန်မာတွေမှာ ဒီလိုလုပ်တတ်တဲ့သူ မရှိခဲ့ လေတော့ အခုအခြေအနေ ကို လျှော့မတွက်ပါနဲ့ လို့……………
Reply့ honey November 20, 2012 - 7:31 pm ၇ခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကကော